ကြယ်ပြာ| November 22, 2012 | Hits:1
| | ကယားပြည်နယ်မှ ရှမ်းပြည်နယ်ဘက် အထွက်လမ်းနှင့် ဆိုင်းဘုတ် (ဓာတ်ပုံ – ခရီးသည် ဘလော့ဂ်)
မီတာခ တိုးကောက်ရန် လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုချက် ယူမည်တတိုင်းတပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ရေရှည် ဖြေရှင်းမှ ရမယ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်၏ မြို့ပြစီမံကိန်းများ ဥပဒေနှင့် မညီဟုဆိုမြန်မာတွေ ဘာလို့ မပျော်တာလဲဇွဲကပင်မှာ ကေဘယ်လ်ကား ဆောက်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်နေကြ
Anonymouse November 22, 2012 - 4:01 pm ***ကယားပြည်နယ်၏ အဓိကလမ်းမကြီး နှစ်ခုအား ကျပ် သန်း ၇၀၀၀ ကျော် သုံးစွဲပြီး ပြင်ဆင် ဆောက်လုပ်မည့် စီမံကိန်းတွင် အစိုးရ အနေဖြင့် ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) ကို အသိပေးညှိနှိုင်းခြင်း မရှိ၍ လုံခြုံရေးပြဿနာများ ပေါ်ပေါက် လာနိုင်ကြောင်း KNPP က ပြောသည်။***
Reply Soe Nyunt November 22, 2012 - 10:01 pm If they refuse, use in Yangon roads because of very
Reply Pet November 24, 2012 - 9:22 am Knpp လဲသူ့အတွက်ဘဲသူကြည့်တာဘဲ. လူထုအတွက်စဉ်းစားပေးကြပါအုံး. လမ်းဖေါက်တာ သဘောမတူရအောင် မင်းဖေါက်ပေးနိုင်လို့လား?